Sony mara mma Aibo Robot puppy nwere atụmatụ ka mma ma nwee aghụghọ karịa | Akụkọ akụrụngwa
Sony mara mma Aibo robot nkịta dị mma ma na-eme ọtụtụ aghụghọ
Sony gara n'ihu na mmepe nke gị robot nwa nkita Aibo ma ugbu a, ọ dị amamịghe ma na-atọ ụtọ karịa nsụgharị mbụ. Na nke a CES 2018 anyị ahụla na na mgbakwunye na ọ bụ robot mara mma, ọ na-ewetara anyị ụdị aghụghọ dị iche iche nke ga-ejide anyị.
Ikike ọgụgụ isi na ihe mmetụta ndị agbakwunyere na-ahapụ ya ka ọ na-agagharị n'enweghị ihe mgbochi na ihe doro anya anaghị adaba na ihe ndị gbara ya gburugburu, mana ihe kachasị mma bụ doro anya na mgbanwe nke ọdịdị nke ọhụrụ Aibo. N’echiche a nke kachasị mma lee foto ole na ole ịkọwa ọdịiche dị ka nke dị n'elu isiokwu a, nke dị ka "ezigbo nkịta" n'ọdịdị na nke dị n'okpuru nke ahụ bụ okenye ochie karịa "robot" karịa nkịta.
Na nkenke, ụdị ọhụụ dị mma karịa nke gara aga na nke a naanị site n'ile anya na akụkụ ahụ nke robot, mana ime ahụ dịkwawanye mma ma nwee ike mee aghụghọ ole na ole ga-eme ka anyị nwee mmasị. Y’oburu n’acho ihu ihe nkita a nke a robot, echefula vidio nke anyi hapuru ebe a n’aka ndi otu anyi si CNET:
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ nnukwu ngwaọrụ maka ndị hụrụ teknụzụ n'anya, mana ọ nweghị maka onye ọ bụla ebe n'oge a na-ere Aibo mara mma naanị na Japan, ọ nwere ike n'ọdịnihu gbasaa na ụwa ndị ọzọ mana amatabeghị data ọzọ. N'aka nke ọzọ, ọ bụghị ngwaọrụ kwesịrị ekwesị maka mmefu ego niile ebe ọnụahịa ya gbasara 198.000 yen, nke ha na-adị ihe dị ka $ 1.760. Nkeji ndị mbụ Ha ga-ebido kesaa ya rue Jenụwarị 11.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Sony mara mma Aibo robot nkịta dị mma ma na-eme ọtụtụ aghụghọ